Brezila: Mpianatra nosamborina nohon’ny fanehoan-kevitra tao amin’ny Antenimieran-doholona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2009 6:44 GMT
Voahilika tsikelikely ny demokrasia sy ny fahalalàhana miteny ao Brezila toy ny efa fahazarantsika mandre trangan-javatra toy ny hoe blaogy nosivanina na olona nofonjàna noho ny fanehoan-kevitra manohitra ny kolikoly. Tamin'ny 19 Aogositra, mpianatra vitsivitsy naneho hevitra nanohitra ny Filohan'ny Antenimieran-doholona José Sarney no nosamborina, notazonina nandritry ny ora telo tao amin'ny efitra iray tao amin'ny Antenimieran-doholona ary nihàran'ny fandrahonana sy ny fiampangana maromaro. Anatin'ity video ity, novokarin'i Christiane Couto, iray tamin'ireo mpianatra voasambotra , hita ao amin'ny Antenimieran-doholona ireo mpanao fanehoan-kevitra ary ireo mpisahana ny fiambenana manomboka ny asany amin'izy ireo:
Ren-tsika ny lehiben'ny mpiambina milaza hoe “ Raha maneho hevitra ato anatin'ny Antenimieran-doholona ianareo, mandeha eto [amin'ity efitra ity]. Izany no sandan'ny fanoherana”. Nanandram-peo ihany koa ireo mpianatra fa norahonana horoahana amin'ny asany izy ireo ary efa saika hogiazana daholo koa ny antontan-taratasin'izy ireo. Maro ireo Loholona niombon-kevitra tamin'ilay hetsika – ary nisy mihitsy aza Mpikambana avy amin'ny Parlemanta Janete Capiberibe izay nisisika ny hijanona miaraka amin'ireo mpaneho hevitra – sy nandresy lahatra ny mpisahana ny filaminana hoe tokony havotsotra izy ireo.
André Dutra [pt], iray tamin'ireo mpaneho hevitra voasambotra, nametraka ilay tranga ho ao anatin'ny vanimpotoanany. Hoy izy miblaogy:
Vantany vao tonga teo amin'ny Antenimieran-doholona, natombokay ny fanehoan-kevitray am-pilaminana ary tampoka teo tonga dia voadarok'ireo mpisahana ny fiambenana mpisetrasetran'ny Antenimiera izahay. Ireo mpiandry varavarana [Bouncers – videurs], sisam-patin'ny mpanao jadona, ireo olon'i Sarney. Lasa naka ny sora-baventinay ry zareo, namolaka ny hato-tànananay, namely mora anay, ary isan'izany ny vehivavy. Norovidrovitin-dry zareo daholo ny zavatra rehetra, saingy tsy nanam-pahasahiana handrovitra ny Lalampanorenana tety amiko kosa ry zareo. Hataoko tsara tahiry ity dika mitovy ity; ho fahatsiarovana fa mbola mba nisy fanajàna kely ihany teto amin'ny fireneko.
Tranga be mpahalàla eo amin'ny tontolon'ny blaogy Breziliana sy eny anivon'ireo mpampiasa Twitter izy ity noho ny fanentanana ho fandàvana an'i José Sarney mitombo isam-bolana izao. Nisarika ny sain'ireo mpitoraka blaogy malaza toa an-dry Marcelo TAS [pt], anarana fantatry ny maro tsy zoviana amin'ny tontolon'ny blaogy Breziliana sy ny CQC, mpanolotra vaovao be vazivazy ao amina fahitalavitra (mitovy amin'ilay “izay alehany any dia alehany” [“No Matter the Cost”] amin'ny teny Portigey). Hoy izy maneho [pt] ny fahatsapàny momba ity tranga ity:
Na eo aza izany rehetra izany, misy fahalalàhana miteny ve eto amin'ity firenena ity? […] Ity blaogy ity dia manohana ny fahalalàhana miteny aho ary mino fa hahay handray lesona ilay gaigy ity rehefa ihàran'ny tsindry izy ireo. Ndeha mipitsika any, ry Sarney a; fiovam-penitra ara-politika izao ary ndeha hanomana ny fo sy ny saintsika isika hamàfa ireny kankana ireny amin'ny fotoam-pifidianan'ny 2010!
“Ndeha mipitsika any, ry Sarney a” sora-baventy iray maneho ny tetiandron'ny mpanohitra manerana an'i Brezila. Loharano: blaogin'i Marcelo Tas
Ny blaogin'i Luciana Capiberibe [pt] dia namoaka lahatsoratra iray momba ny fomba fikirakiran'ny mpampita vaovao ao an-toerana ity olana ity. Araka ny A Gazeta, gazety an-tsoratra iray avy any Amapá, dia toa manadihady amin'izao fotoana izao ny Polisin'ny Antenimieran-doholona momba izay fandraisan'anjaran'ny MP Janete Capiberibe tamin'ny fikarakarana ilay hetsi-panoherana, iampangàna ny MP ho nanome R$ 40 (eo amin'ny US$ 21) ho an'ireo mpianatra, mba hahatonga azy ireo handray anjara amin'ilay fanehoan-kevitra. Ilay mpitoraka blaogy dia namoaka sary avy amin'ny lohateny lehiben'ny gazety an-tsoratra ary nasiany anarana:
A Gazeta Newspaper, misy rohy mitondra ho any amin'i José Sarney ao [amin'ny fanjakan'i] Amapá, dia manao fiampangana tsy mitombina.
Francis Pessoa nanamarika ao amin'ny blaogin'i Luciana Capiberibe tery ambony, amin'ny fanampiana fa [pt]:
[…] Mahavariana ny fomba fiasan'ny “GAZETY” ao Amapá. Fotoana vitsy tany aloha tany, ny sasany tamin'ireo miasa amin'ity gazety an-tsoratra ity no zatra niasa ho ana “taratasy fifirana” iray hafa. Ankehitriny any amin'ny ilany indray ry zalahy dia milaza fa izy no tena mahery, ny manan-danja sy gazety tena be mpamaky indrindra ao Amapá. Mpandainga ireo. Ny “taratasy fifirana” dia atsipy any anaty fanariam-pako eny an-dalambe mba haverina haodina indray.Antenaiko ny Breziliana rehetra mba hanana solosaina azy manokana avy sy fahafahana miditra amin'ny ATERNETO. Rehefa tonga izay andro izay, maro amin'ireo mpisandoka “taratasy fifirana” ireo no hitsahatra tsy hivezivezy intsony ary ny vahoaka dia hahita varavarana misokatra (amin'ny fomba demokratika) mankamin'ny fahamarinana. Ary ianareo, “GAZETY” voalavo mpisandoka, tsy hanam-bintana intsony…
Izany ihany no ilaintsika! Ry mpanonta gazety, heverinareo ho kentrina ve ‘zahay? Manaraka ny zavatra rehetra amin'ny ATERINETO izahay, ny VOHIKALA, ny BLAOGY, ny TWITTER ary ireo mpanao gazety matotra avy any Belém do Pará, Brasília, São Paulo sy ny [fanjakana] hafa maro koa. Saingy efa antomotra ny andronareo, ary ianareo no naniry hahatongavan'izany…
Ny fanehoan-kevitra ampilaminana hikatsahana ny rariny sy ny fahalalàhana miteny ary hanoherana ny kolikoly eo amin'ny governemanta dia raisina ho heloka bevava ao anatin'ny Brezila ankehitrio. Tsavkko – The Angry Brazilian [pt] mitanisa tranga maro mifandraika amin'ity maneraka ny firenena, ary manampy:
Ny zavatra hitantsika izao dia endrika iray tsy azo ovana amin'ny fanaovana antsojay sy ny fanaovana heloka bevava amin'ireo Hetsika Sosialy, ho fanampin'ny herisetra mahamenatra manohitra ny fahalalàhan'ny vahoaka, ny zon'izy ireo hanohitra, hitaraina sy haneho hevitra. Ny fanararaotana dia matetika avy amin'ny ‘hery mpitandro filaminana’, na izany sivily na avy amin'ny fanjakana, ary tsy misy na inona na inona atao hanakanana azy ireo.Rahoviana no hifarana marina ny jadona?
André Dutra manandratra ny taratasy misy ny “Ndeha mipitsika any, ry Sarney a!”.